China Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit na-emepụta na ndị na - eweta ya | Na-adanye Bio
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit
Coronavirus nke a na-ede akwụkwọ bụ nje RNA, nke mejupụtara protein na acid acid. Nje virus na-abata n'ahụ mmadụ (mmadụ), na-abanye sel site na njigide saịtị kwekọrọ ekwekọ ACE2, ma na-emepụtakwa na mkpụrụ ndụ ndị ọbịa, na-eme ka usoro ahụ mmadụ ji egbochi ndị mwakpo nke ndị mba ọzọ wee mepụta ọgwụ mgbochi. Ya mere, vial nucleic acids na antigens, na nje kpọmkwem na-alụso ọgụ megide coronavirus nwere ike ịkọwapụta ya dị ka ndị na-arụ ọrụ biomarkers maka nchọpụta nke akwụkwọ coronavirus. Maka nchọpụta acidic acid, a na-ejikarị teknụzụ RT-PCR eme ihe.
Ihe omuma Coronavirus (SARS-CoV-2) A na-ezube Multiplex Real-Time PCR Kit iji mezuo nchoputa nke SARS_CoV-2 nke nje RNA nke eweputara site na nasopharyngeal swabs, oropharyngeal swabs, sputum na BALF site n'aka ndi oria na FDA / CE. Usoro ntinye nke IVD na nyiwe PCR a họpụtara edepụtara n’elu.
Ezubere kit a ka ndị ọrụ nyocha ụlọ nyocha were rụọ ọrụ
Ihe PCRR a dị oke nro, nke dị njikere iji dị na usoro lyophilized (usoro mkpochapu) maka nchekwa ogologo oge. Enwere ike ibufe ya ma chekwaa ya na ụlọ okpomọkụ ma kwụsie ike ruo otu afọ. Igwe ọ bụla nke premix nwere ihe niile dị mkpa maka mmụba PCR, gụnyere Reverse-transcriptase, Taq polymerase, primers, probes, na dNTPs. Naanị ihe ọ ga-agbakwunye bụ 13ul distilled mmiri na 5ul amịpụtara RNA template, mgbe ahụ, ọ nwere ike na-agba ọsọ na adịkwu na PCR ngwá.
Igwe qPCR kwesịrị iru ihe ndị a:
1. Dabara 8 warara PCR tube olu 0.2 ml
2. Nwee ihe karịrị ọwa ụzọ nchọpụta anọ:
Ihe eji ejiji ehicha
FAM, SYBR Green M
ROX, TEXAS-AKW .KWỌ
Ihe ngosi PCR:
Ihe isi ike nke njem oyi nke njem Novel Coronavirus nucleic acid nchọpụta reagent
Mgbe a na-ebufe ndị na-eme nchọpụta acidic na-aga ebe dị anya, achọrọ (-20 ± 5) chain nchekwa nchekwa na njem iji hụ na bioactive nke enzyme na ndị reagents na-anọgide na-arụ ọrụ. Iji jide n'aka na ọnọdụ okpomọkụ rutere n'ụkpụrụ, ọtụtụ kilogram nke akọrọ akpụrụ dị mkpa maka igbe ọ bụla nke nyocha nucleic acid na-erughị 50g, mana ọ ga-adịgide naanị ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. N'ihe banyere omume nke ụlọ ọrụ, ezigbo ibu nke ihe ndị na-emepụta ihe nyere bụ ihe na-erughị 10% (ma ọ bụ ihe na-erughị uru a) nke akpa ahụ. Imirikiti ibu ahụ sitere na ice akọrọ, ngwugwu ice na igbe ụfụfụ, yabụ ọnụ ahịa njem dị elu nke ukwuu.
Na Machị 2020, COVID-19 bidoro gbasasịa n'ọtụtụ buru ibu na mba ofesi, na achọ akwụkwọ nyocha Novel Coronavirus nucleic acid reagent bara ụba n'ike. N'agbanyeghị oke ọnụ ahịa nke mbupụ ndị reagents na igwe oyi, ọtụtụ ndị nrụpụta ka nwere ike ịnabata ya n'ihi nnukwu ọnụọgụ na uru dị elu.
Agbanyeghị, site na mmelite nke atumatu mbupụ mba maka ngwaahịa mgbochi ọrịa, yana mmelite nke njikwa mba na mmụba nke ndị mmadụ na lọjistik, enwere ndọtị na ejighị n'aka na oge njem nke ndị reagent, nke butere nsogbu ngwaahịa ama ama kpatara site na njem. Ogologo oge njem (oge njem nke ihe dị ka ọkara ọnwa bụ ihe a na-ahụkarị) na-eduga na ọdịda ngwaahịa oge niile mgbe ngwaahịa ahụ ruru onye ahịa. Nke a enyekpala ọtụtụ nucleic acid reagents export ụlọ ọrụ.
Lyophilized technology maka PCR reagent nyeere njem nke Novel Coronavirus nucleic acid nchọpụta reagent n'ụwa nile
Enwere ike ibuga ma chekwaa ihe ndị PCR ndị a na-ahụ maka ihe ọkụkụ, nke nwere ike ọ bụghị naanị belata njem njem, kamakwa zere nsogbu nsogbu nke usoro njem na-ebute. Ya mere, lyophilizing reagent bụ ụzọ kachasị mma iji dozie nsogbu nke njem mbupụ.
Lyophilization gụnyere ime ka ihe ngwọta ghọọ ọnọdụ siri ike, wee belata ma kewaa alụlụ mmiri n'okpuru ọnọdụ agụụ. Solute a mịrị amị na-anọgide n'ime akpa nwere otu ihe ahụ mejupụtara. E jiri ya tụnyere mmiri mmiri reagent, nke zuru-akụrụngwa lyophilized Novel Coronavirus nucleic acid nchọpụta reagent mepụtara Liming Bio nwere ndị na-esonụ e ji mara:
Oké ike okpomọkụ kwụsie ike: ọ nwere ike na nkwụnye ọgwụgwọ na 56 ℃ maka ụbọchị 60, na morphology na arụmọrụ nke reagent na-agbanwe agbanwe.
Nkịtị okpomọkụ nchekwa na njem: ọ dịghị mkpa maka eriri oyi, ọ dịghị mkpa ịchekwa na obere okpomọkụ tupu ịpịpụ ya, hapụ ohere nchekwa oyi.
Njikere iji: lyophilizing nke ihe niile, ọ dịghị mkpa maka nhazi usoro, na-ezere ọnwụ nke ihe ndị nwere viscosity dị elu dị ka enzyme.
Multiplex lekwasịrị anya na otu tube: Nchọpụta lekwasịrị anya na-ekpuchi akwụkwọ coronavirus ORF1ab gene, N gene, S gene iji zere nje genovariation. Iji belata ụgha na-adịghị mma, a na-eji mkpụrụ ndụ RNase P mmadụ eme ihe dị ka njikwa dị n'ime, ka o wee nwee ike ịchọta mkpa ahụike maka njikwa njikwa.
Ntuziaka PCR / MSDS
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka ahụike
Mpempe akwụkwọ PCR 3.0
Akwụkwọ mpempe akwụkwọ maka ọrịa
Nke gara aga: SARS-CoV-2 IgM / IgG Antibody Rapid Test
Osote: SARS-CoV-2 Antigen Rapid Ule
Multiplex Real-Time PC Kit
Sars-Cov-2 Rna Ezigbo Oge Pcr Kit
Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale, Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa,